Chakavanzika Zvombo zvekushambadzira Zvirinani uye Kutengesa | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 5, 2013 Kelsey Washington
Kudzoka muzuva, kunzwisisa izvo zvaidiwa nevatengi waive mutambo wekufungidzira, asi nematurusi anhasi senge analytics uye marketing automation, kufungidzira maitiro evatengi kuri nyore.
95% emakambani anoshandisa kufungidzira analytics yakashuma zvirinani zvinotungamira, kugona kukuru, uye / kana zvimwe zvakapfigwa kutengesa Zvakare, 59% yeCMOs vanonzwa kuti kushandisa otomatiki kushambadzira mhinduro kuchawedzera kwavo kwekushambadzira matekiniki 'kugona uye kushanda. Zvemagetsi zvinobatsira mukusimudzira tarisiro mune zvinotungamira, saka hausi kutambisa zviwanikwa kune vatengi vasina kugadzirira kutenga, pane kusarudza tarisa kune avo vari.
Makambani eSavvy ari kubvumidza otomatiki kushambadzira kuongorora maitiro evatengi kuitira kuti vashambadzi vatarise nguva yavo pazvinhu zvakakosha mabasa. Iyi infographic, na Lattice Engines, inoona data rakatenderedza analytics uye otomatiki, uye maitiro ekushandisa izvi zvakavanzika zvombo kuvaka chirongwa chiri nani chekushambadzira.